Izidingo Zomthetho WeMbewu - Umagazini Wamazambane
Umthethosivivinywa wokukhiqizwa kwezimbewu, owethulwe nguMnyango Wezolimo kuhulumeni ekupheleni kuka-Ephreli, ufuna ukubuyekezwa okukhulu. Bobabili abasebenza kwezolimo kanye nezinkonzo ezihlobene nabo banesiqiniseko salokhu. Ngendlela okuyiyo njengamanje, ngeke ixazulule inkinga yokufakwa esikhundleni sembewu ebekwe ngumongameli.
Kunezikhalazo eziningi ezinkulu. Lo mthethosivivinywa wethula isidingo sokuthola amalayisense kanye nesitifiketi sokukhiqizwa kwembewu. Kodwa-ke, impendulo yoMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho kule projekthi ithi isidingo sokuthola isitifiketi siphikisana nomthetho ophathelene nokulawulwa kwezobuchwepheshe. Futhi ukugunyazwa kwamalayisense akudingekile embonini, ngoba inhloso yawo eyinhloko ukuvimbela ukulinyazwa kwamalungelo, impilo noma impilo yezakhamizi, imvelo. Futhi ngezinye izinhloso, ukulayisensa akuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, lo mbhalo wethula ukuvalwa kokungeniswa kwezimbewu zakwamanye amazwe ngaphandle kokulawulwa kokutshala kwazo nokusebenza yiziphathimandla zaseRussia. Inemisebenzi eyeqile, imingcele kanye nemikhawulo ye-agribusiness, futhi futhi kungaholela ezindlekweni ezingenangqondo zabalimi kanye nezabelomali zawo wonke amazinga, baphetha eMnyangweni Wezomnotho.
Ekuqaleni kukaJuni, abaholi bezinhlangano eziyisithupha zezimboni bathumele indawo ehlanganisiwe kulo msebenzi eMnyangweni Wezolimo. Bavumelana neMinek: ukuqinisekiswa kanye nokuthola amalayisense kuzodinga izindleko ezingeziwe kusuka ebhizinisini, okungeke kwandise isifiso sokutshala imali embonini. Kepha lezo zinyathelo azizukuthinta ikhwalithi yemikhiqizo futhi ngeke zixazulule udaba lokuqamba amanga.
Ngokusho koMnyango Wezolimo, ngokwemiphumela ka-2019, isabelo sembewu yokukhethwa ezifuywayo esetshenziswa eRussia sabalelwa kuma-62,7%. Iningi labalimi baseRussia bancike embewu yokungenisa imbewu yeshukela (imbewu yasekhaya i-0,6% yenani).
Tags: ngconoumthetho wembewuimikhawulo yokusebenzelana kwezwe